लगानी | गृहपृष्ठ | Page 6
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १४:०८ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टाको अवधिमा जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से ३ दशमलव १६ अंकले बढ्न पुगेको छ । कारोबारको एक घण्टामा १ हजार २८०...	बिस्तृतमा
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १३:३७ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जरको प्रस्ताव अघि सार्दै विशेष साधारण सभा वैशाख २६ गते गर्न लागेको छ । कम्पनीले अन्य कुनै वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने...	बिस्तृतमा
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १३:१२ नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टामा १ हजार २८० दशमलव शून्य ८ विन्दुमा पुगेको नेप्से दोस्रो घण्टामा १ हजार २७० दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको छ । जीवन बीमा र निर्जीवन बीम...	बिस्तृतमा
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफामा २ सय ५५% वृद्धि
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १२:५३ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । चैत मसान्तसम्ममा ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा २ सय ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ४ करोड १८ लाख पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीले रू. १ करो...	बिस्तृतमा
नेपाल सेवा लघुवित्तको सीईओमा श्रेष्ठ
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १२:४४ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको वैशाख ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वैशाख...	बिस्तृतमा
आईपीओको लाइन लागेपछि मेरो शेयरको एपमा समस्या
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १२:३४ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । बजारमा सात कम्पनीहरुको एकैसाथ आइपिओ जारी भएसँगै धेरै लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिँदा विद्युतीय प्रणाली मेरो शेयरले काम गर्न छाडेको ब्रोकर बताउँछन् । तर सिडिएस एण्ड क्लिय...	बिस्तृतमा
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १२:०९ नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टाको अवधिमा १४ दशमलव १२ अंकले बढेर १ हजार २७८ दशमलव ३२ विन्दुमा पुगेको छ । परिसूचक बढेसँगै १ सय ११ कम्पनीको रू. २० करोड ७८ लाख बराबर...	बिस्तृतमा
एभरेष्ट बैंकको खुद नाफा १८ प्रतिशतले वृद्धि, वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ३५ करोड
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १२:०२ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । चालू आवको चैत मसान्तमा एभरेष्ट बैंकको खुद नाफा १८ प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू. १ अर्ब ८७ करोड कमाएको थियो । बैंकको खुद ब्याज...	बिस्तृतमा
समताको बोनस शेयर शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार ११:३२ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । समता लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बोनस शेयर शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा भाएको छ । कम्पनीले पाचौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित ६ दशमलव ६६ प्रतिशत बोनस शेयर जम्मा गरि...	बिस्तृतमा
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार ११:०४ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्सेमा दुई कम्पनीको मूल्य समायोजन भएको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समायोजन भएको हो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ स...	बिस्तृतमा